Raindahiny amin’ny fanafihana eny Anosibe : voasambotry ny zandary Ralavaloha sy ny namany (NewsMada) | AEMW
Raindahiny amin’ny fanafihana eny Anosibe : voasambotry ny zandary Ralavaloha sy ny namany (NewsMada)
Saron’ny zandary avy ao amin’ny sampana fikarohana heloka bevava eny Fiadanana, ny alakamisy teo ireo jiolahy tarik’i Ralavaloha raindahiny amin’ny fanafihana eny amin’iny faritra Anosibe sy Andavamamba iny…
Jiolahy fantatra amin’ny anaram-bositra hoe Ralavaloha na Ravilana, Hery sy Naina na koa hoe Lekambana ireto tratran’ny zandary ireto. Malaza ratsy amin’ny fanafihana sy fanendahana ary fanaovana sinto-mahery amin’iny faritra Anosibe sy Andavamamba iny ry zalahy ireto. Araka ny fanazavan’ny zandary, olona iray handeha no notsindronin’izy ireo ny antsy teo Ambilanibe, ny 24 jona 2016 hariva, saingy tsy maty fa avotra ihany ilay niharam-boina. Lasan’izy ireo tamin’izany, ny tablette-n’io olona io. Fantatra tamin’ny alalan’ny fanadihadiana hatrany fa eo Ambilanibe Andavamamba no toerana fanafihan’ireto jiolahy ireto ka ireo olona tratra hariva sy alim-podiana no lasibatr’izy ireo. Naharay fitoriana avy amin’olona efa niharan’ny fanafihana nataon’ireo jiolahy ireo ny zandary taorian’ny nahasamborana azy ireo, araka ny tatitra voaray hatrany.
Nilaza kosa ry zalahy nandritra ny fakana am-bavany nataon’ny zandary fa mbola misy namany mitondra basy miriaria any ary efa eo am-panenjehana azy ireo ny zandary eo anivon’ny sampana fikarohana heloka bevava.
Manentana ny olona tsirairay hatrany ny zandarimariam-pirenena amin’ny fanomezam-baovao sy tsy hatahotra ny hitory rehefa misy trangan-javatra toy izao.
← Malemy amin’ny lafiny maro (NewsMada)
Fahafatesan’ny minisitry ny angovo : hanaovana fanadihadiana ilay mpivarotra tekateka (NewsMada) →